काठमाडौं । लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको चालक अनुमतिपत्र भर्नेको सङ्ख्या तीन सातामा नै झण्डै चार लाख पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कात्तिक ८ गतेदेखि आवेदन पुनः खुलाएको थियो । दुई वर्षयता नियमितरुपमा सेवा चालू नभएकाले पनि थोरै समयमा धेरैको आवेदन परेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । कात्तिकभन्दा पहिलेसम्म झण्डै दुई लाख आवेदन दिएकाको परीक्षा लिन बाँकी रहेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या झण्डै ६ लाखको हाराहारीमा पुगेको विभागका प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुसालले बताए ।
उनले भने, “अहिले अपडेट गरेपछि फारम बुझाउन सकिएन भन्ने गुनासो छैन ।” विसं २०७६ चैतमा कोभिडका कारण सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरेसँगै नयाँ चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा रोकिएको थियो । गत वर्ष माघमा सङ्क्रमण कम भएको भन्दै अनलाइन फाराम खुलाइएको भएपनि सङ्क्रमण पुनः बढेपछि स्थगित भएको थियो । दुई वर्षयता नियमितरुपमा परीक्षा हुन नसकेकाले धेरै सेवाग्राही परीक्षामा सहभागी हुन पाइरहेका छैनन् ।-रासस
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक २९, २०७८, ०२:११:००
स्थानीय तहका १६१३ जना कर्मचारीको एकैपटक सरुवा (सूचीसहित)
प्रधानमन्त्री देउवाले दिए मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता, को-को बने मन्त्री ? (सूचीसहित)
१६ जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवाः ११ जिल्लाका सीडीओ फेरिए, को-कहाँ पुगे (सूचीसहित)
सरकारले ६ जना सहसचिव र १० जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
एकैपटक ४४ उपसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [सूचीसहित]
शुक्रवार, आश्विन १५, २०७८ सुरक्षा न्युज
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैपटक ४४ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
हेलिकप्टर दुर्घटनामा भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावतको मृत्यु बुधवार, मंसिर २२, २०७८ 283